အချစ်တွေပြည့်နေတဲ့ ချောကလက် Truffle ကို အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်စားကြမလဲ???
အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ ချောကလက် Truffle ကို အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်စားကြမလဲ???
Stay Home ကာလမှာ တော်တော်များများက အိမ်မှာရှိတာတွေကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ စားနေရတာ ငြီးငွေ့လာပြီဆိုရင် အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် အပြင်စာလေးတွေ တောင့်တတတ်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အပြင်ထွက်ဝယ်တာမျိုး၊ အပြင်ကနေ မှာစားတာမျိုးကလည်း အင်မတန်မှ အန္တရာယ်များလှပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာတင် ပါဝင်ပစ္စည်း (၂) မျိုး၊ (၃) မျိုးလောက်နဲ့ အလွယ်တကူနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပြီး အရသာလည်းရှိတဲ့ ချောကလက် Truffle လုပ်နည်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ နို့ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ မုန့်ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး နို့ဆီကို ထမင်းစားဇွန်း အနည်းဆုံး (၇) ဇွန်းကနေ (၁၀) ဇွန်းအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ချောကလက်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Cocoa အမှုန့်ဖြစ်ပြီး ဒါကိုလည်း ထမင်းစားဇွန်း (၅) ဇွန်းကနေ (၁၀) ဇွန်းလောက်အထိ ထည့်ရမှာပါ။ Cocoa အမှုန့်ရဲ့နေရာမှာ တချို့တွေဆို မိုင်လိုအမှုန့်တို့၊ အိုဗာတင်းအမှုန့်တို့ကိုလည်း ထည့်သုံးနေတာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ နို့ဆီကို ထမင်းစားဇွန်း (၇) ဇွန်း၊ Cocoa အမှုန့်ကို (၅) ဇွန်းထည့်တာက ကိုယ့်တစ်ယောက်စာအတွက် ကောင်းကောင်းလုံလောက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ နို့ဆီကို အိုးထဲထည့်ပြီး ကျိုပေးပါ။ နို့ဆီကျိုဖို့ အသုံးပြုတဲ့အိုးက သိပ်မကပ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး မီးကိုလည်းအလွန်မပြင်းဘဲ ခပ်အေးအေးလောက်ပဲ ထားပြီး ကျိုသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့ဆီကိုကျိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်း အဆက်မပြတ်မွှေပေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျိုတဲ့နေရာမှာ အကြာကြီးကျိုစရာမလိုတာကြောင့် တီဗီပြေးကြည့်လိုက်၊ လာမွှေလိုက် မလုပ်ပါနဲ့နော်။ အမြှုပ်လေးနည်းနည်းထပြီး ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ နို့ဆီကျိုတဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပါပြီ။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Cocoa အမှုန့်တွေကို ဇကာနဲ့စစ်ပြီး စောစောကကျိုထားတဲ့နို့ဆီထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ သတိထားရမယ့်အချက်က နို့ဆီကျိုနေတဲ့မီးကို ပိတ်ပြီးမှ အပေါ်က Cocoa အမှုန့်ကို ထည့်ရမှာပါနော်။ ပြီးရင် ကျိုထားတဲ့နို့ဆီနဲ့ Cocoa အမှုန့်တို့ကို သမအောင် သေချာနယ်ပေးပါ။ ဒီအဆင့်မှာ အပျော့အမာကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ဆနိုင်ပြီး နယ်တဲ့အချိန်မှာခပ်ပျော့ပျော့ဖြစ်နေတာကို သဘောမကျဘူးဆိုရင် Cocoa အမှုန့်ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နယ်တဲ့နေရာမှာ လက်နဲ့နယ်တာထက် မွှေတံလေးကို အသုံးပြုသင့်ပြီး လက်နဲ့နယ်မယ်ဆိုရင်လည်း လက်မှာမကပ်အောင်လို့ ရေ ဒါမှမဟုတ် ဆီ သုတ်ပြီး နယ်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင်အဲ့ဒီကရလာတဲ့အနှစ်တွေကို ဗန်းတစ်ဗန်းထဲထည့်ပြီး အပေါ်က ပလတ်စတစ်အုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီအနှစ်ကိုပဲ ဒီအတိုင်း ပလတ်စတစ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ (၂) နာရီကနေ (၃) နာရီလောက်အထိ ထည့်ထားပါ။ ဒီမှာလည်း တစ်ခုသတိထားရမှာက အမြန်ရချင်ဇောနဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်က ရေခဲခန်းထဲ သွားမထည့်ဘဲ သာမန်အခန်းတွေမှာပဲ ထည့်ထားပါနော်။
အဲ့ဒီနောက် ခဲသွားတဲ့ ချောကလက်အနှစ်တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အတုံးလေးတွေတုံးပြီး အလုံးဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် အသွင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ အလုံးမလုံးဘဲ အတုံးလေးတွေအဖြစ်နဲ့လည်း စားလို့ရပါတယ်။ အတုံးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာ စောစောက ပိုတဲ့ Cocoa အမှုန့်ထပ်ဖြူးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ရောင်စုံဆေးသကြားခဲလေးတွေ ထပ်ဖြူးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် အလှဆင်ပြီးစားသုံးလို့ရပါပြီ။
ဒီ ချောကလက် Truffle လုပ်နည်းလေးက ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းလိုအပ်တာမရှိဘဲ အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တင် အဆင်သင့်လုပ်စားလို့ရတာကြောင့် လက်မနှေးဘဲ မနက်ဖြန် Super Sunday မှာတင် ချောကလက် Truffle လေးကို စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Source: Internet, onlinebakery